ဆိုင်ကယ်၊ ကားတွေ မှာ ထည့်နေ တဲ့ Octane ဆီ 92 , 95 ဆိုတာ ဘာတွေလဲ? – Let Pan Daily
ဆိုင်ကယ်၊ ကားတွေ မှာ ထည့်နေ တဲ့ Octane ဆီ 92 , 95 ဆိုတာ ဘာတွေလဲ?
92 , 95 ဆိုတာ ဘာတွေလဲ ? ပရီမီယမ် ဓာတ်ဆီ ၊ ပရီမီယမ် ဒီဇယ်ဆီ ဆိုတာဘာလဲ ?ဓာတ်ဆီဆိုင်တွေ တော်တော် များများမှာ ရောင်းနေတဲ့ အောက်တိန်းဆီ ( Octane ) ၊ 92 , 95 ဆီဆိုတာလေး နည်းနည်းရှင်းပြချင်လို့ပါ ။Octane ဆိုတာ တော်တော်များများ ခေါ်ဝေါ်ပြောဆိုနေကြတဲ့ အောက်တိန်း ဆိုတာ ရေနံနဲ.သဘာဝ ဓာတ်ငွေ.က နေ လာတဲ့ (Hydrocarbon) ဓာတ်ပေါင်းစုတွေထဲက နာမည်တခုပါ ။
အခု ကားတွေမှာထည်.တဲ့ ဓာတ်ဆီတွေ ကို ဘာကြောင့် အောက်တိန်းဆီလို. ခေါ်ကြတာလဲ ဆိုရင် ဓာတ်ဆီ ( Gasoline) ရဲ့အကောင်းဆုံးသော အရည်အသွေးပြည်.မှီ / မမှီကို အဲ့ဒီဓာတ်ဆီထဲမှာ အောက်တိန်း အရေအတွက် ဘယ်လောက် ပါဝင်သလဲဆိုတာနဲ့ တိုင်းတာယူလို့ပါပဲ ။Octane Rating Method လို့ လဲခေါ်သလို ၊ ” Research Octane Number (RON) ” လို.လည်း ခေါ်ကြပါတယ် ။ ကားတော်တော်များများမှာလည်း 92 RON , 95 RONဆိုပြီး ကပ်ထားတာလည်း မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။Octane Number က ကားအင်ဂျင်ရဲ. စွမ်းအားနဲ့ ဘယ်လိုဆက်နွယ်နေသလဲ ဓာတ်ဆီရဲ့ အောက်တိန်း အရည်အသွေး အနိမ့်အမြင့်တွေဟာ ဓာတ်ဆီအင်ဂျင်တခုရဲ. Compression Ration (ဖိသိပ်မှုအချိုး ) နဲ့တိုက်ရိုက် ဆက်သွယ်နေပါတယ် ။
ဖိသိပ်မှု အားကောင်းတဲ့အင်ဂျင်တခုထဲကို အောက်တိန်း နံပါတ် နိမ့်တဲ့ (တနည်း) ဆီအရည်အသွေးနိမ့်တဲ့ ဓာတ်ဆီထည့် လိုက်မိတယ်ဆိုရင် (Engine Knocking and Pre-Ignition) ဆိုတဲ့ အင်ဂျင်မီးခေါက်တဲ့ပြသနာတွေကြုံတွေ့လာရပါတယ်။ဘာကြောင့် ဆီအရည်အသွေးနိမ့်ရင် အင်ဂျင်မီး ခေါက်ရသလဲ ဆိုတော့ ဓာတ်ဆီ အင်ဂျင်တွေမှာလည်း လေနဲ့ဆီကို ရောနှောပြီး Piston ကနေဖိသိပ်ပြီးမှ ပလပ်ကနေ မီးပွား ခတ်ပြီးမီးလောင်ရပါတယ် ။အဲ့လိုနေရာမှာ အောက်တိန်း အရည်အသွေးနိမ့်တဲ့ ဆီကိုအသုံးပြု မိလိုက်တယ်ဆို ပလပ်က မီးပွားမခတ်ခင် Piston ကနေဖိသိပ်လိုက်တယ် ဆိုရင်ပဲ အရည်အသွေးနိမ့်တဲ့ ဓာတ်ဆီဟာ ( Self-Ignition ) အလိုအလျောက်သူ့ ဘာသာမီးထ လောင်ကျွမ်းပါတယ် ။
အဲ့အတွက် Engine Timing တွေအောက်ကုန်ပြီး အင်ဂျင်မီး ခေါက်သံ တွေကြားရပါတယ် ။ ကာလကြာရှည်လာရင် အင်ဂျင်ကို အတိုင်းအတာတခု အထိ ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ် ။Octane Number မြင့်လေလေ Piston ကနေဖိသိပ်တဲ့ Compression Ration (ဖိသိပ်မှုအချိုး ) ကို ပိုခံနိုင်လေလေ ဖြစ်ပြီး ညင်သာချောမွေတဲ့ အင်ဂျင် မီးလောင်ပေါက်ကွဲမှုကို ဖြစ်စေပါတယ် ။Research Octane Number (RON) တွေကို တိုင်းတာတဲ့နေရာမှာ 90 ကနေ 92 RON ပတ်ဝန်းကျင် ကို Regular ပုံမှန် ဓာတ်ဆီလို့ခေါ်ပြီး ။95 RON ကနေစလို. 96 ၊ 97 ကနေ 100 RON တွေကိုတော့ (Premium) ပရီမီယံ ဓာတ်ဆီလို. သတ်မှတ် ထားပါတယ် ။
ကျနော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံ မှာတော့ အောက်တိန်းအရည်အသွေး 95 RON တွေကိုအများဆုံး ရောင်းချနေပြီး အခြားဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံတွေမှာတော့ 95 အထက် အောက်တိန်းနံပါတ်မြင့်တဲ့ ဆီအမျိုးအစားတွေကို အသုံးပြုကြပါတယ် ။မှတ်ချက် အနေနဲ့ကတော့ အင်ဂျင်ရဲ. ဖိသိပ်မှုအရည်အသွေး တနည်း အင်ဂျင်ပါဝါ မြင့်တဲ့ကားတွေမှာ ပရီမီယံအဆင့် အောက်တိန်းနံပါတ်အမြင့် ဓာတ်ဆီတွေကို အသုံးပြုသင့်ပြီး ၊ အင်ဂျင်ပါဝါကျနေတဲ့ ကားတွေမှာတော့ အောက်တိန်း နံပါတ်အမြင့် ပရီမီယံဂရိတ်ဓာတ်ဆီကို အသုံးပြုရင်တောင် အကျိုးကျေးဇူး အနည်းငယ်ပဲ ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါက Octane ဆီခေါ် ပရီမီယံ ဓာတ်ဆီအကြောင်းပါ။
ပရီမီယံ ဒီဇယ်ဆိုတာဓာတ်ဆီအရည်အသွေးကို အောက်တိန်းနံပါတ်နဲ့ တိုင်းတာလို့ ( Octane ) ဆီဆိုပြီး မြန်မာနိုင်ငံက လူတွေတော်တော် များများသိကြပါတယ် ။အဲ့ဒီလိုပဲ ဒီဇယ်ရဲ့အဆင့် အရည်အသွေး ကိုတိုင်းတာတဲ့ ယူနစ်တခုရှိပါတယ် ။ အဲ့ဒါကိုတော့ ဆီတိန်းနံပါတ် ( Cetane Number ) လို့ ခေါ်ပါတယ် ။ကျနော်မြင်ဖူးသလောက် ဆီဆိုင် တော်တော်များများမှာ ဆီတိန်းနံပါတ်ဆိုပြီး ဖော်ပြ ထားတာမတွေ.ရပါဘူး ။ ဒီဇယ်ကိုတော့ အခြေခံအားဖြင့် ဓာတ်ဆီလိုပဲ ဆီတိန်း နံပါတ်ဘယ်လောက်ပါဝင်သလဲ ဆိုတာနဲ့တိုင်းတာပြီးဆီထဲမှာ အခြား Energy ဘယ်လောက်ပါသလဲ စေးပျစ်နှုန်းဘယ်လောက်ရှိသလဲ ၊ ချောဆီအဆင့်ဘယ်လောက်ရှိသလဲ ၊ ဆာလဖာ ပါဝင်မှုနှုန်းအနည်းအများ ဘယ်လောက်ရှိသလဲဆိုတာတွေပါ တိုင်းတာပြီး ပုံမှန် ဒီဇယ် ၊ ပရီမီယံဒီဇယ်ဆိုတဲ့ စံနှုန်းတွေသတ်မှတ်ပါတယ် ။
အင်ဂျင်အပေါ် ပရီမီယံဒီဇယ်ရဲ. သက်ရောက်မှုကတော့ အပေါ်က ဓာတ်ဆီအင်ဂျင်မှာ အောက်တိန်းအရည်အသွေး အနိမ့်အမြင့်ပေါ်မူတည်ပြီး သက်ရောက် သလိုပါပဲ ။ပုံမှန်အရည်အသွေး ဒီဇယ်တွေမှာ ဆီတိန်း (Cetane Number ) 40 -45 လောက်ရှိပြီး ၊ 53-55 ကနေပြီး ဆီတိန်းနံပါတ်အမြင့် ဆီတွေကိုတော့ (Premium Diesel ) ပရီမီယံ ဂရိတ်ဒီဇယ်ဆိုပြီး စံနှုန်း သတ်မှတ်ထားပါတယ် ။ဒါကတော့ ပရီမီယံ ဒီဇယ်အကြောင်းပါ ။အချုပ်ပြောရရင် ဓာတ်ဆီအရည်အသွေး အနိမ့်အမြင့်ကို (Octane Number ) နဲ.တိုင်းတာပြီး ၊ ဒီဇယ် အရည်အသွေး အနိမ့်အမြင့်ကို( Cetane Number ) နဲ. တိုင်းပါတယ်ခမျာ ။
ဆိုငျကယျ၊ ကားတှေ မှာ ထညျ့နေ တဲ့ Octane ဆီ 92 , 95 ဆိုတာ ဘာတှလေဲ?
92 , 95 ဆိုတာ ဘာတှလေဲ ? ပရီမီယမျ ဓာတျဆီ ၊ ပရီမီယမျ ဒီဇယျဆီ ဆိုတာဘာလဲ ?ဓာတျဆီဆိုငျတှေ တျောတျော မြားမြားမှာ ရောငျးနတေဲ့ အောကျတိနျးဆီ ( Octane ) ၊ 92 , 95 ဆီဆိုတာလေး နညျးနညျးရှငျးပွခငျြလို့ပါ ။Octane ဆိုတာ တျောတျောမြားမြား ချေါဝျေါပွောဆိုနကွေတဲ့ အောကျတိနျး ဆိုတာ ရနေံနဲ.သဘာဝ ဓာတျငှေ.က နေ လာတဲ့ (Hydrocarbon) ဓာတျပေါငျးစုတှထေဲက နာမညျတခုပါ ။
အခု ကားတှမှောထညျ.တဲ့ ဓာတျဆီတှေ ကို ဘာကွောငျ့ အောကျတိနျးဆီလို. ချေါကွတာလဲ ဆိုရငျ ဓာတျဆီ ( Gasoline) ရဲ့အကောငျးဆုံးသော အရညျအသှေးပွညျ.မှီ / မမှီကို အဲ့ဒီဓာတျဆီထဲမှာ အောကျတိနျး အရအေတှကျ ဘယျလောကျ ပါဝငျသလဲဆိုတာနဲ့ တိုငျးတာယူလို့ပါပဲ ။Octane Rating Method လို့ လဲချေါသလို ၊ ” Research Octane Number (RON) ” လို.လညျး ချေါကွပါတယျ ။ ကားတျောတျောမြားမြားမှာလညျး 92 RON , 95 RONဆိုပွီး ကပျထားတာလညျး မွငျတှနေို့ငျပါတယျ။Octane Number က ကားအငျဂငျြရဲ. စှမျးအားနဲ့ ဘယျလိုဆကျနှယျနသေလဲ ဓာတျဆီရဲ့ အောကျတိနျး အရညျအသှေး အနိမျ့အမွငျ့တှဟော ဓာတျဆီအငျဂငျြတခုရဲ. Compression Ration (ဖိသိပျမှုအခြိုး ) နဲ့တိုကျရိုကျ ဆကျသှယျနပေါတယျ ။
ဖိသိပျမှု အားကောငျးတဲ့အငျဂငျြတခုထဲကို အောကျတိနျး နံပါတျ နိမျ့တဲ့ (တနညျး) ဆီအရညျအသှေးနိမျ့တဲ့ ဓာတျဆီထညျ့ လိုကျမိတယျဆိုရငျ (Engine Knocking and Pre-Ignition) ဆိုတဲ့ အငျဂငျြမီးခေါကျတဲ့ပွသနာတှကွေုံတှလေ့ာရပါတယျ။ဘာကွောငျ့ ဆီအရညျအသှေးနိမျ့ရငျ အငျဂငျြမီး ခေါကျရသလဲ ဆိုတော့ ဓာတျဆီ အငျဂငျြတှမှောလညျး လနေဲ့ဆီကို ရောနှောပွီး Piston ကနဖေိသိပျပွီးမှ ပလပျကနေ မီးပှား ခတျပွီးမီးလောငျရပါတယျ ။အဲ့လိုနရောမှာ အောကျတိနျး အရညျအသှေးနိမျ့တဲ့ ဆီကိုအသုံးပွု မိလိုကျတယျဆို ပလပျက မီးပှားမခတျခငျ Piston ကနဖေိသိပျလိုကျတယျ ဆိုရငျပဲ အရညျအသှေးနိမျ့တဲ့ ဓာတျဆီဟာ ( Self-Ignition ) အလိုအလြောကျသူ့ ဘာသာမီးထ လောငျကြှမျးပါတယျ ။
အဲ့အတှကျ Engine Timing တှအေောကျကုနျပွီး အငျဂငျြမီး ခေါကျသံ တှကွေားရပါတယျ ။ ကာလကွာရှညျလာရငျ အငျဂငျြကို အတိုငျးအတာတခု အထိ ထိခိုကျစနေိုငျပါတယျ ။Octane Number မွငျ့လလေေ Piston ကနဖေိသိပျတဲ့ Compression Ration (ဖိသိပျမှုအခြိုး ) ကို ပိုခံနိုငျလလေေ ဖွဈပွီး ညငျသာခြောမှတေဲ့ အငျဂငျြ မီးလောငျပေါကျကှဲမှုကို ဖွဈစပေါတယျ ။Research Octane Number (RON) တှကေို တိုငျးတာတဲ့နရောမှာ 90 ကနေ 92 RON ပတျဝနျးကငျြ ကို Regular ပုံမှနျ ဓာတျဆီလို့ချေါပွီး ။95 RON ကနစေလို. 96 ၊ 97 ကနေ 100 RON တှကေိုတော့ (Premium) ပရီမီယံ ဓာတျဆီလို. သတျမှတျ ထားပါတယျ ။
ကနြျောတို့ မွနျမာနိုငျငံ မှာတော့ အောကျတိနျးအရညျအသှေး 95 RON တှကေိုအမြားဆုံး ရောငျးခနြပွေီး အခွားဖှံ့ဖွိုးပွီးနိုငျငံတှမှောတော့ 95 အထကျ အောကျတိနျးနံပါတျမွငျ့တဲ့ ဆီအမြိုးအစားတှကေို အသုံးပွုကွပါတယျ ။မှတျခကျြ အနနေဲ့ကတော့ အငျဂငျြရဲ. ဖိသိပျမှုအရညျအသှေး တနညျး အငျဂငျြပါဝါ မွငျ့တဲ့ကားတှမှော ပရီမီယံအဆငျ့ အောကျတိနျးနံပါတျအမွငျ့ ဓာတျဆီတှကေို အသုံးပွုသငျ့ပွီး ၊ အငျဂငျြပါဝါကနြတေဲ့ ကားတှမှောတော့ အောကျတိနျး နံပါတျအမွငျ့ ပရီမီယံဂရိတျဓာတျဆီကို အသုံးပွုရငျတောငျ အကြိုးကြေးဇူး အနညျးငယျပဲ ရရှိမှာဖွဈပါတယျ ။ ဒါက Octane ဆီချေါ ပရီမီယံ ဓာတျဆီအကွောငျးပါ။
ပရီမီယံ ဒီဇယျဆိုတာဓာတျဆီအရညျအသှေးကို အောကျတိနျးနံပါတျနဲ့ တိုငျးတာလို့ ( Octane ) ဆီဆိုပွီး မွနျမာနိုငျငံက လူတှတေျောတျော မြားမြားသိကွပါတယျ ။အဲ့ဒီလိုပဲ ဒီဇယျရဲ့အဆငျ့ အရညျအသှေး ကိုတိုငျးတာတဲ့ ယူနဈတခုရှိပါတယျ ။ အဲ့ဒါကိုတော့ ဆီတိနျးနံပါတျ ( Cetane Number ) လို့ ချေါပါတယျ ။ကနြျောမွငျဖူးသလောကျ ဆီဆိုငျ တျောတျောမြားမြားမှာ ဆီတိနျးနံပါတျဆိုပွီး ဖျောပွ ထားတာမတှေ.ရပါဘူး ။ ဒီဇယျကိုတော့ အခွခေံအားဖွငျ့ ဓာတျဆီလိုပဲ ဆီတိနျး နံပါတျဘယျလောကျပါဝငျသလဲ ဆိုတာနဲ့တိုငျးတာပွီးဆီထဲမှာ အခွား Energy ဘယျလောကျပါသလဲ စေးပဈြနှုနျးဘယျလောကျရှိသလဲ ၊ ခြောဆီအဆငျ့ဘယျလောကျရှိသလဲ ၊ ဆာလဖာ ပါဝငျမှုနှုနျးအနညျးအမြား ဘယျလောကျရှိသလဲဆိုတာတှပေါ တိုငျးတာပွီး ပုံမှနျ ဒီဇယျ ၊ ပရီမီယံဒီဇယျဆိုတဲ့ စံနှုနျးတှသေတျမှတျပါတယျ ။
အငျဂငျြအပျေါ ပရီမီယံဒီဇယျရဲ. သကျရောကျမှုကတော့ အပျေါက ဓာတျဆီအငျဂငျြမှာ အောကျတိနျးအရညျအသှေး အနိမျ့အမွငျ့ပျေါမူတညျပွီး သကျရောကျ သလိုပါပဲ ။ပုံမှနျအရညျအသှေး ဒီဇယျတှမှော ဆီတိနျး (Cetane Number ) 40 -45 လောကျရှိပွီး ၊ 53-55 ကနပွေီး ဆီတိနျးနံပါတျအမွငျ့ ဆီတှကေိုတော့ (Premium Diesel ) ပရီမီယံ ဂရိတျဒီဇယျဆိုပွီး စံနှုနျး သတျမှတျထားပါတယျ ။ဒါကတော့ ပရီမီယံ ဒီဇယျအကွောငျးပါ ။အခြုပျပွောရရငျ ဓာတျဆီအရညျအသှေး အနိမျ့အမွငျ့ကို (Octane Number ) နဲ.တိုငျးတာပွီး ၊ ဒီဇယျ အရညျအသှေး အနိမျ့အမွငျ့ကို( Cetane Number ) နဲ. တိုငျးပါတယျခမြာ ။
“အသကျကွီး မှ နောငျတ မရအောငျ ငယျရှယျစဉျမှာ လုပျထား သငျ့တဲ့ အရာ (၅) ခု”
လူ တစ်ယောက် ၏ ပင်ကိုယ် စရိုက် တွက် ကြည့် နည်း